Tantarani Madagasikara Info. About. What's This?
Lucien Xavier Michel Andrianarahinjaka
ⓘ Tantarani Madagasikara
1. "Vahoakan ny ala"?
Ny teny hoe vazimba dia mety ho avy aminny teny daiaka sy maley hoe wa-yimba izay midika hoe na "vahoakan ny ala". Ireo vahoaka tany amorontsiraka kosa dia nantsoina hoe vezo na bejo avy amin ny teny maley hoe bajao. Ny teny hoe wa na va dia midika "andian olona" na "vahoaka madinika". Niaraka tonga ny Vazimba sy ny Vezo saingy rehefa nahita ny Vazimba fa tsy azo ambolena ny morontsiraka dia niakatra ampovoantany.
2.1. I Madagasikara faha mpanjaka Ny nahalalana an i Madagasikara voalohany ka hatramin ny Fanjakana Hova
Hatraminny taonjato voalohany taor. J.K dia tsy nazava loatra ny tena tantaran i Madagasikara. Tsy nisy nahitana taratra fa nisy karazan olombelona niaina talohan io fotoana io, ka nahatonga ny fieritreretana fa tsy nanana fiandohan-tantara ity Nosy ity. P. Laforgue, izay mpandalina tantara dia nanambara fa "toe-javatra hafa kely izany, nefa dia izay no zava-misy".
Na ny nanazavana ny fiavianireo mponina sy ny fotoana tena nipoirany aza dia tsy voalaza mazava. Maro ny soso-kevitra naroso, isanizany ny ani G. Grandidier, mpikaroka, nilazana fa ny Malagasy dia Indô-melaniziana, nisy nifandraisany tamin ny olona avy tao Papoazia. Ny governora Deschamps kosa dia nihevitra fa nisy ireo tansambo izay niatrika ny Ranomasimbe Indiana, ka izany no niheverany fa ny mponina indôneziana dia niala avy tany India sy ny sisin i Afrika izay toerana nakan izy ireo ny mainty hoditra. Rehefa izany dia nitohy tamin ny sisin i Afrika ny fifanakalozana mandra-pahatongan ny fotoana nampatanjaka ny Arabo teo amin ny fifamoivoizana an-dranomasina.
Araka ny hevitr i Deschamps noho izany, ny mponina malagasy hatramin ny fahagola dia fifangaroan ny mponina indôneziana sy afrikana, na eo amin ny fiteniny na eo amin ny fomba amam-panao, ary niampy tsikelikely ireo maleziana, Hindò, Arabo, ary Eorôpeana.
Maro ireo tantsambo nandalo ny morontsirak i Madagasikara; tao ny Arabo, i Marco Polo, i Vasco de Gama, ireo Portogey Pereira sy dAcunha, de Gonneville. fa tsy voalaza mazava na tena niantsona tamin ny tany malagasy izy ireo na tsia.
Ny nanombohan ny Fanjakana hova
Tsy nahazoana valiny mazava izy io, efa tamin ny andron Andrianampoinimerina vao nisy daty nazava. Ny taona 1300 kosa no noheverina ho nanombohan ny Fanjakana hova tamin ny andron Andrianerinerina. Nanomboka teo ka nandritra ny taonjato roa teo ho eo, dia nisy mpanjaka dimy no nifandimby tao. Tamin ny taona 1500 kosa no niakatra teo amin ny fiandrianany ny mpanjakavavy Rafohy, ka tamin ny androny no azo lazaina ho tena niforonan ny fanjakana, tsy noho izy nahazo fanjakana hafa, satria izy dia niaina tamim-pahatsorana tao Imerimanjaka, fa noho ny fahendrena tsy nanam-paharoa nanananity vehivavy ity taminny fandaminana ny fifandimbiasana teo amin ny fiandrianana. Ny zanany vavy, Rangita, no nandimby azy taminny taona 1520.
2.2. I Madagasikara faha mpanjaka Fifandraisana amin ny Arabo
I Madagasikara dia ivon-toeran ny varotra miampita ranomasina izay mampifandray ny seranan-tsambo ao amin ny Ranomasimbe Indiana tany am-piandohanny taonjato manaraka ny fitondranolombelona. Ny tantaranny tantara nosoratana eto Madagasikara dia nanomboka taminny Arabo, izay nametraka lahatsoratra ara-barotra teo aminny morontsiraka avaratra-andrefana taminny faramparanny taonjato faha-10 ary nampiditra ny finoana silamo, ny soratra arabo nampiasaina hanoratra ny fiteny malagasy aminny endrika manoratra fantatra aminny hoe sorabe, ny astrôlôjia arabo, ary ireo singa ara-kolontsaina hafa. Nanomboka tamin ny 1500 ny fifandraisana Eorôpeana, rehefa nahita ilay nosy ny kapiteny portogey atao hoe Diego Dias. Ireo tranombarotra frantsay dia iniorina taminny morontsiraka atsinanana taminny faramparanny taonjato faha-17.
Nanomboka taminny 1774 ka hatraminny 1824 dia nahazo laza teo aminny jiolahin-tsambo sy ny mpivarotra eorôpeana i Madagasikara, indrindra fa ireo mpandray anjara aminny varotra andevonny morontsiraki Atlantika. Ny nosy kely ao Nosy Boraha, avy any avaratra-nosy avaratra atsinanani Madagasikara, dia navoakanny mpahay tantara sasany ho toa fitoerani Libertalia. Tantsambo Eorôpeana maro no nirodana teny aminny morontsiraky ny Nosy, anisanizany i Robert Drury, ny diariny no iray aminireo sary vitsivitsy momba ny fiainana any atsimoni Madagasikara nandritra ny taonjato faha-18. Ny harena nateraky ny varotra sambo dia nampitombo ny fiakaranny fanjakana niorina tao aminilay nosy, ny sasany taminireo dia nihanatanjaka taminny taonjato faha-17. Anisanizany ny fikambanana Betsimisaraka any aminny morontsiraka atsinanana sy ny lehibenny Sakalava anny Menabe sy Boina any aminny morontsiraka andrefana. Ny fanjakanImerina, izay miorina any afovoan-tany afovoany sy ny renivohiny ao aminny lapa-mpanjaka ao Antananarivo, dia niitatra taminny fitarihanny mpanjaka Andriamanelo.
2.3. I Madagasikara faha mpanjaka Ny Fanjakana merina 1700 - 1896
Tamin ny fiandohan ny taonjato faha-17 dia ny fanjakan Imerina dia fanjakana tsy natanjaka raha noharina tamin ireo fanjakana amoron-dranomasina lehibe kokoa ary mbola lasa kely kokoa ny fahatanjahany taminny taonjato faha-18, nandritra ny fanjakan Imerina efa-toko.
2.4. I Madagasikara faha mpanjaka Andrianampoinimerina 1787-1810
Andianampoinimerina no andriandehibe hova nitondra ny anarana hoe "Mpanjakani Madagasikara". Ny nampalaza azy dia ny fahaizany nandrindra sy nandamina ary nanitatra ny fanjakany, "Ny ranomasina no valamparihiko" no teny filamatra nentina nanjaka ary fandriampahalemana no niainanireo fanjakany. Niamboho taminny faha-dimy amby enimpolo taonany Andrianampoinimerina taminny 1810.
Taorianny ady sy ny mosary nandritra ny taonjato maromaro, dia tafaverina indray i Imerina taminny 1793, mpanjaka Andrianampoinimerina 1787-1810. Avy aminny renivohiny voalohany Ambohimanga, ary taty aoriana avy aminny RovanAntananarivo, io mpanjaka merina io dia nanitatra haingana ny fitondrany taminireo taninandriana mifanolo-bodirindrina. Ny tanjony dia hifehy ny nosy iray manontolo. Ny zanany nandimby azy, mpanjaka Radama I 1810-28, no nahavita izany.
2.5. I Madagasikara faha mpanjaka Radama I 1810-1828
Valo ambinny folo taona Ilaidama raha nandimby anAndrianampoinimerina taminny taona 1810, ary Radama I no anarana nentiny.
Izy no nekenny governemanta britanika ho mpanjakani Madagasikara. Namarana fifanekena i Radama taminny 1817 niaraka taminny governorani Britanika ao Maorisy mba hanafoanana ny fivarotana andevo mendri-kaja ho anny miaramila britanika sy ny fanampiana ara-bola. Nanomboka tonga taminny tona 1818 ny misionera anglisy avy aminny London Missionary Society; anisanireo olona ireo i James Cameron, David Jones ary David Griffirths izay nanangana sekoly, nametraka ny fanoratana teny malagasy taminny alalanny abidy latina ary nandika ny baiboly, ary koa nampiditra karazana teknôlôjia vaovao teto aminny nosy Madagasikara.
Nandritra ny taonjato faha-19 dia nisy fifandrafiana teo aminny fitondrana frantsay sy ny mpitondra anglisy tao aminny nosy Maorisy izay nihevitra ani Madagasikara ho eo ambany fifehezany. Voasolonny Angletera noho izany ny toerana notazonini Frantsa tao Madagasikara, ary afaka nifandray ara-pihavanana sy ara-diplomatika tamin-dRadama I izy ireo. Ny fanjakani Radama I, noho izany, dia voamariky ny fanananny Anglisy fahefana tanteraka.
Nandritra ny fiandrianany no nanitarani Radama ny fanjakany hatrany Toamasina, Mahajanga ary Taolagnaro. Nofoanany ny fanandevozana, natsangany ny tafika, ny fitsarana ambony sy ny mpitsara fara-tampony. Nofoanany koa ny fanamelohana ho faty, fa nosoloiny ny fonja. Natsangany ny sekoly, ny fanotam-boky, ary ny tenany mihitsy no manara-maso akaiky ny taozava-baventy sasantsasany.
Nomeny fahalalahana hisafidy ny finoany ny vahoakany na dia somary tsy niraika firy taminny fivavahana aza izy. Taminizany no nahazo vahana ny "fitoriana ny teninAndriamanitra" nataonny Protestanta.
Ny 27 jolay 1828 izy no niamboho, taminny faha-enina ambinny telopolo taonany ; ny zava-pisotro mahamamo no nanimba ny fahasalamany. Ramatoa vadiny, Ramavo, no nandimby azy.
2.6. I Madagasikara faha mpanjaka Ranavalona I 1828-1861
Ramavo, vadinny mpanjaka niamboho, no nandimby an-dRadama I araka ny lalànanny fifandimbiasana eo aminny fiandrianana, ka Ranavalona I no anarana nentiny.
Nanjaka tanteraka ny antokonny hova taorianny niambohonilay Mpanjaka tia fahalalahana, ary dia nanjaka tokoa ny habibiana izay tsy mbola fahita tao Madagasikara taminizany. Namoaka karazana lalàna izay nanageja tokoa ny vahoakany ny Mpanjakavavy. Ny habibiana, ny finoanoam-poana ary ny fankahalana ny vahiny no tena nanamarika ny fotoana nanjakany. Noroahiny ireo vahiny ary nobodoiny ny tany sy fanananizy ireo; nanamparany ny fahefany ny Protestanta; nofoanany ny finoana kristiana, noheverina ho fahavalonny fanjakana sy mpamadika ireo misionera sy ny mpanaraka azy. Taminny taona 1849 no tena nafana ny fanenjehana ireo Kristiana izay nodorana velona, notapahan-doha na navarina avy teny aminny havoana.
Frantsay vitsy dia vitsy no mba navahanny Mpanjakavavy taminizany, ka isanireo i Jean Laborde, izay olona nitokisany tokoa nandritra ny 25 taona. Izy no nanangana ozinina maro, sy nampiditra indostria maro tao aminny firenena ary izy koa no vy nahitana ny Rovani Manjakamiadana, izay nilana olona anarivorivony taminny nananganana azy. I Jean Laborde no naharesy lahatra ny Mpanjakavavy ka nampalefaka azy taminny vahiny. Nanomboka nisokatra ny fifanakalozana ara-barotra aminny tany ivelany.
Ranavalona I dia naneho hevitra momba ny fahamendrehana ara-politika sy ara-kolotsaini Britaina sy Frantsa miaraka aminny didy amam-pitsipika izay nandrara ny fampiharana ny kristianisma eto Madagasikara ary namporisika ny ankamaroanny vahiny handao ny nosy. Ireo mponina eto Madagasikara dia afaka niampanga ny heloka isan-karazany toy ny halatra, ny fanarahana ny fivavahana kristiana ary indrindra ny famosaviana, izay voasazy aminny fihinanana tangena. Teo anelanelanny taona 1828 sy 1861, dia nahafaty olona 3 000 teo ho eo isan-taona ny fandaràn ny tangena. Anisanireo nanohy niaina tao Imerina i Jean Laborde, mpandraharaha iray izay nanamboatra basy sy nanorina orinasa hafa taminny anaranny fitondram-panjaka, ary Joseph-François Lambert, mpiantoka frantsay sy mpivarotra andevo niaraka tamini Printsy Radama II, dia nanao sonia fifanarahana fifaneraserana fantatra aminny anarana hoe Charte Lambert.
Ny zoma 16 Aogositra 1861, taminny 7 ora maraina no niamboho taminny faha-73 taonany ny Mpanjakavavy rehefa nanjaka 33 taona.
2.7. I Madagasikara faha mpanjaka Radama II 1861-1863
Rakoto, zanakalahini Ranavalona I, no nandimby an-dreniny, ka naka ny anarana Radama II. Teo dia làlam-piainana vaovao, hafa tokoa noho ny taminny teo aloha no niainanny Nosy, satria raha lozabe tsy mba nandefitra ny Mpanjakavavy Ranavalona I, ity zanany nandimby azy kosa dia tena olonny fo sy malalaka. Ny tena mba faniriany dia ny hanamaivana ny fahorianny vahoakany sy ny hahasambatra azy.
Toa ny niaina fitsanganana taminny maty ny vahoaka taminizany, vahoaka afa-patorana ka nahazo fahafahana. Nandritra ny fotoana fohy nanjakany, dia nomen-dRadama II fahafahana ny andevo rehetra, nasaina natsahatra ny fanenjehana ny Kristiana Protestanta ary nomeny vahana ny fananganana ny eglizy katolika romana, nofoanany ny haban-tseranana, ary nomeny alalana honina ny vahiny.
Noho izy tsy mba nanafina ny fitiavany ani Frantsa sy ny Andriandehibeny, dia nangataka tamini Napoléon III izy hanendry solontenam-panjakana frantsay ao Antananarivo. I Jean Laborde, namana akaikinny Mpanjaka no voatendry taminizany, ary izy kosa dia nanendry ani Lambert ho lehibenny Masoivohoni Madagasikara tao Parisy.
Kanefa ny hatsaram-panahinny Mpanjaka dia lasa nivadika ho fahalemena ihany koa. Nisy antokonolona mpankahala azy nitsangana malaky, ka Rabodo vadiny indrindra no lohany taminizany. Notoheriny ny fitondranny vadiny, ka nikononkonona ny hanjera ny fanjakany izy. Io antoko mankahala an-dRadama II io no nohararaotinny Anglisy niaraha-dia mba hahafahany mampahazo laka ny politika viktoriana. Ellis, misionera anglisy, no isanny nandranitra ny toe-draharaha raha nanaparitaka fa tadiavinny Frantsay alaina an-keriny ny tany malagasy ka mila tapahina haingana dia haingana ny fifandraisana amini Frantsa sy Napoléon III. Babony hatraminny fonny praiminisitra Rainivoninahitriniony.
Radama II dia nanandrana ny hamaha ny politikam-piarahamoninny mpanjakavavy, saingy roa taona taty aoriana dia noroahinny praiministra Rainivoninahitriniony 1852-1865 sy ny fifanarahana aminny Andriana sy ny Hova, izay nanandrana namarana ilay fahefana feno an ny mpanjaka.
Ny 11 mey 1863 dia nisy nahazo baiko tamin ny praiminisitra namono an-dRadama II. Rabodo vadiny no voatendry ho mpanjakavavin i Madagasikara nandimby azy, nitondra ny anarana Rasoaherina.
2.8. I Madagasikara faha mpanjaka Rasoherina 1863-1868
Taorianny fanandramam-panonganana dia nomenireo tandapa fahafahana manjaka i Rasoherina 1863-1868 vadin-dRadama, raha manaiky fizaram-pahefana aminny Praiminisitra izy. Izany fifanarahana ara-piarahamonina izany dia ho tanteraka aminny alalanny fanambadiana manana endrika politika. Nanaiky ny mpanjakavavy Rasoherina ka nanambady ani Rainivoninahitriniony, ary taorianny fanonganana azy dia nanambady ny rahalahiny Rainilaiarivony 1864-1895, izay hanambady an-Ranavalona II 1868-1883 sy an-dRanavalona III 1883-1897.
Raha nanome fahalalahana tanteraka teo aminny varotra, ny indostria ary ny finoana isan-karazany Radama II taminny androny, ireo nandimby ny asany kosa dia nanararaotra namoaka karazan-dalàna taminny anaranny Mpanjakavavy, ka anisanizany ny famerenana ny famelohana ho faty, saingy ny Mpanolotsaina ambony eo aminny firenena ihany no mahazo mampihatra izany, ary voaantoka ny fahalalahana ara-pinoana.
Tsy te-hiverina intsony aminny hasiahana sy habibiana nanjaka taminny andron-dRanavalona I ny fitondrana vaovao, saingy tsy nekeny kosa ny fifandraharana tamini Frantsa izay nosoniavini Radama II.
Ny Mpanjakavavy, izay notokanana ho mpanjaka taminny 30 Aogositra 1863, dia nitondra ny anaram-boninahitra mpanjakavavy fotsiny, fa ny tena nandidy teo aminny fitondrana dia ny Praiminisitra Rainivoninahitriniony. Raha nivadika ho Protestanta ny praiminisitra dia somary nanomboka nandrara ny finoana katolika izy. Kanefa na dia natahotra ity lehilahy tsy refesi-mandidy ity aza Rasoaherina, dia vitany ihany ny nanolo azy taminny zandriny manaraka azy, Rainilaiarivony, taminny 14 Jolay 1864.
Rehefa narary nandritra ny fotoana lavalava ny Mpanjakavavy Rasoaherina dia niamboho taminny 1 Aprily 1868.
2.9. I Madagasikara faha mpanjaka Ranavalona II 1868-1883
Ramoma, zanakolona mpiray tam-po aminny Mpanjakavavy Rasoaherina, no nandray ny fiandrianana taminny anarana Ranavalona II ny 3 Septambra 1868. Namoaka ny didy momba ny fandrimpahalemana ary namerina ny fivavahana Kristianina izy.
Teraka taminny taona 1829 Ranavalona II. Fotoana nifanandrinanny Frantsay sy ny Britanika izany ka ny teto Madagasikara dia ny fivavahana kristiana protestanta sy katolika no nisehoanizany. Ramoma no anaranilay mpanjakavavy talohanny nahalasa mpanjaka azy. Niakatra teo aminny fitondrana izy taminny nahafatesan-dRasoherina. Nanambady an-dRainilaiarivony izay efa vadinny mpanjakavavy nodimbiasany izy.
Nahazo laka ny fivavahana protestanta taminny androny ary lasa fivavaham-panjakana izany satria natao batisa protestanta ny mpanjakavavy. Nodorany ny sampy ka nosoloany ny Baiboly. Niditra malalaka ny fomba vazaha. Nihamaro ka naharatra hatrany aminny 30 000 any ho any ny vatan-dehilahy tao aminny tafiny izay nampandry tany aminny Sakalava sy ny hafa koa.
Taminny taona 1883 no nahafatesany sady nandimbiasan-dRanavalona III an-Ranavalona II.
2.10. I Madagasikara faha mpanjaka Ranavalona III 1883-1896
Ranavalona III dia mpanjakavavy malagasy izay nanjaka tao aminny Fanjakani Madagasikara taminny taona 1883 hatraminny taona 1897. Izy no mpanjaka farany tao aminizany fanjakana izany. Vao 21 taona monja izy taminny taona 1883 raha nandray ny fitondrana taminny nahafatesan-dRanavalona II. Razafindrahety no anarany fahazaza ary ny praiminisitra Rainilaiarivony izay efa vadinny mpanjakavavy roa teo alohany no lasa vadiny.
Na dia niady mafy ny tsy hiankina na taminny Frantsay na taminny Britanika aza izy dia nanao sonia ny fifanarahana tao Toamasina taminny taona 1885 izay nahatonga ani Madagasikara hiankina ara-toekarena tamini Frantsa. Nitady fanampiana tamini Etazonia sy Britaina Lehibe izy taty aoriana mba hialany amini Frantsa nefa tsy tanteraka ny faniriany noho ity firenena ity nifanaiky taminny Frantsay taminny taona 1890 fa hamela ani Madagasikara ka haka ani Zanzibara.
Niharihary ny tsy faneken-dRanavalona III ny ho eo ambany fifehezan ny Frantsay ka tamin ny taona 1895 ny tafika frantsay notarihini jeneraly Duchesne dia naka anAntananarivo. Izany fidiranny Frantsay an-keriny izany dia niteraka korontana eranny Nosy nefa nanaiky ny ho ambany fiarovani Frantsa ny fanjakan-dRanavalona III taminny farany, taminny taona 1896.
Naonganny Frantsay taminny fitondrany Ranavalona III taminny taona 1897 nahatongavanny jeneraly Galiéni teto Madagasikara ka natao sesitany tany La Réunion avy eo tany Aljeria noho ny raharaha Menalamba izay fihetseham-bahoaka nanoheranny Malagasy ny fanjanahan-tany. Maty tany an-tsesitany i Ranavalona III taminny taona 1917. Lasa zanatany frantsay tanteraka aminizay i Madagasikara.
Mpanjaka merina farany teto Madagasikara ary nalefa sesitany tany Alzeria.
3. I Madagasikara faha fanjanahan-tany 1896 - 1960
Vanim-potoana nidiran ny Frantsay teto Madagasikara, fotoana nanamarika ny fidirany tao amin ny taonjato faha-20. Azo lazaina hoe nitondra fandrosoana sy fivoaram-piainana ihany teo anivon ny andavanandrony ihany raha ny fivoarana teo amin izao tontolo izao no jerena. Saingy teo amin ny lafiny pôlitika izay novolavolain ny fanjanahantany ho tsy afaka hijoro sy hahaleo tena no mandrafitra ny tantarany ka niteraka ny fivakisan ny firaisankina izay fototry ny maha nosy azy.
4. I Madagasikara mahaleotena
Ny Repoblika Faharoa 1973 - 1991
Taorianny faharavanny Fitondranny Repoblika Voalohany dia nisy ny Tetezamita izay fotoana noheverina handinihan-tena teo aminny Tantarani Madagasikara.
4.1. I Madagasikara mahaleotena Ny Repoblika Voalohany 1960 - 1973
Ity no vanim-potoana nandraisan ny malagasy ny fitantanana ny fireneny indray, izany hoe mitovy amin ireo firenena rehetra eran-tany i Madagasikara. Saritsarim-pahaleovantena ihany no nilazana io vanim-potoana io satria ny sehatra rehetra dia nakan ny mpitondra tamin izany fankatoavana tany amin ny firenena nanjanaka teo aloha. Ary izay no niteraka ny fanehoam-panoherana ny taona 1972 ka niafara tamin ny fahataperan ny Repoblika Voalohany.
4.2. I Madagasikara mahaleotena I Philibert Tsiranana
I Tsiranana Philibert no filohan i Madagasikara tamin ny 1 Mey 1959 hatramin ny 11 Oktobra 1972.
Tamin ny 1 jolay 1959 dia nivory ny Antenimieram-pirenena ka nametraka ny fitokisany taminy ho filohan ny Repoblika Malagasy voalohany mizaka tena. Tamin ny 26 jiona 1960 no nahazo ny fahaleovantenany i Madagasikara. Tamin ny 30 martsa 1965 dia voafidy fanindroany hitondra ny firenena i Philibert Tsiranana. Tamin ny 30 janoary 1972 dia voafidy fanintelony ho filoha izy. Tamin ny 13 mey 1972 ny tolon ny mpianatra teo amin ny Kianjan ny Fahaleovantena teo Analakely, ka nahatonga ny fionganan ny fitondrana Tsiranana.
4.3. I Madagasikara mahaleotena Ny Repoblika Faharoa 1973 - 1991
4.4. I Madagasikara mahaleotena Gilles Andriamahazo
Pejy iray teo aminny tantarani Madagasikara io, ary noheverina fa teboka hiaingana hiatrehana ny fandrosoana eran-tany. Teo vao nihevitra fa ho afaka tanteraka ny vanim-potoananny Fanjanahantany. Herinandro ihany anefa ny faharetanizany satria maty voatifitra ny kolonely Ratsimandrava ny 11 febroary 1975. Dia nisy Tetezamita indray teo fa tsy naharitra an-taona fa am-bolana ihany.
4.5. I Madagasikara mahaleotena Ny filoham-pirenena Ratsiraka Didier
Ny Capitaine de frégate Ratsiraka Didier no voatendry hitondra ani Madagasikara taty aminny faranny taona 1975. Niezaka ny hitondra hevi-baovao sy fijery vaovao taminny alalanny fandaharanasa iray dia ny Boky Mena ity manamboninahitra tantsambo ity ary naharesy lahatra ny maro taminny Malagasy izy taminizany.
Noho ireo toe-javatra maro nitranga ka niteraka fahoriana sy fahasahiranana lalina teo aminny fiainam-pirenena, dia voatery ny vahoaka izay nentanny antoko politika sahy nanohitra ny fitondrani Ratsiraka Didier naneho fa tsy afaka ny hiharitra intsony izy. Rehefa nitokona am-bolana vitsivitsy ny vahoaka dia resy lahatra ny mpitondra fa tsy afaka hampandeha ny fitondrana intsony ka nifampiraharaha taminny mpanohitra izay nekenny vahoaka ho mpitondra ny feony.
4.6. I Madagasikara mahaleotena Ny filohanny HAE Zafy Albert
Ny 31 Oktobra 1991 no nanamarika ny fiafaranny Repoblika faharoa ary koa varavarana hisokatra hoanny Repoblika fahatelo. Na dia tsy nanapakevitra firy intsony teo aminny fitantanan-draharaham-panjakana intsony aza Ratsiraka dia mbola nitazona ihany ny anaram-boninahitra maha filohanny Repoblika azy ihany.
I Zafy Albert no nitazona ny andrikitra teo aminilay andrim-panjakana H.A.E lehibe natao hampijoroana ny Repoblika fahatelo. Narafitra ny lalam-panorenana vaovao, natao daholo izay rehetra hita fa madinana tokony ho tetenina taminny lasa.
4.7. I Madagasikara mahaleotena Ny filoham-pirenena Zafy Albert
Ny taona 1993 vao tafajoro tanteraka ny repoblika fahatelo, lany ho filoham-pirenena taminizany i Albert Zafy izay nanankinanny ankamaroanny malagasy ny safidiny. Sahirana teo aminny fitadiavam-bahaolana ara-toekarena ireo mpitondra ka niteraka fifanoheran-kevitra teo aminireo samy mpiaramitolona izany, ka ny taona 1996 dia voatery naato taminny asany maha filoham-pirenena azy i Zafy Albert, io dia ny lalampanorenana ihany no nahafahana nampiato azy ary sambany teo aminny Tantarani Madagasikara no nisy fanonganam-panjakana tao anatinny fanajana ny lalàna tanteraka.
4.8. I Madagasikara mahaleotena Ny filohanny tetezamita Ratsirahonana Norbert
Dia nitsangana ny tetezamita notarihini Ratsirahonana Norbert izay filohanny Fitsarana Avo Momba ny Lalàm-panorenana taminizany. Dia nikarakara ny fifidianana izay ho filoham-pirenena hasolo ani Zafy izy. Nirotsaka hofidina indray teo Ratsiraka ka niverina nifaninana indray izy sy Zafy.
4.9. I Madagasikara mahaleotena Ny filoham-pirenena Ratsiraka Didier
Tafaverina ho filoha indray Ratsiraka ny taona 1997 ary nanitsy ny Lalàm-panorenana ka ny mahaolona sy ny tontolo iainana indray no nentiny handresena lahatra ny malagasy.
Niditra taminny fizarana faharoanny Repoblika fahatelo teo ny firenena malagasy, 5 taona no niainana izany foto-kevitra vaovao izany, izay fotoana ninianny malagasy maro tsy notoinina. Na dia noheverina ho manana traikefa sy fahaizamanao noho ny fotoana maro nitondrany ani Madagasikara aza Ratsiraka, dia tsy nisy fanavaozana nentiny teo aminny fitantanana. Raha ny fifanarahana iraisam-pirenena no jerena dia nitohy avokoa ireny rehefa niato nandritra ny fotoana nitondrani Zafy Albert. Maro ny vola fanampiana sy nindramina nentina hanatsarana ny fahefa mividinny vahoaka, saingy tsy nisy fiantraikany teo aminny tantsaha indrindra.
Voamariky ny firongatry ny andiam-balala ny taom-pambolena zary lasa niteraka famoronana asa vaovao ny famongorana ny andiam-balala sy ny atodiny. Ny zanaky ny filoha no nahazo izany tsena izany, saingy tsy dia nifanaraka loatra taminny vokatra nandrasana no azo.
4.10. I Madagasikara mahaleotena Ny filoham-pirenena Ravalomanana Marc
Ny taona 1999 nisy ny fifidianana izay ho benny tanàna ka taminizany no nipoirana olona vaovao teo aminny sehatra politika. Anisanireny ny mpandraharaha tomponny orinasa Tiko, izay tsy fantatra fa ny vokatra vokarinny orinasany ihany no fantatra. Ravalomanana Marc no nanana fahasahiana nijoro hitondra fijery vaovao. Mbola tanora tsy mbola heno teo aminny tontolo politika malagasy ity lehilahy ity ka nanaitra ny mponinAntananarivo izay toerana nilatsahany ho fidina.
Nanangana fikambanana izy nahazoany nilatsaka dia ny "Tiako i Madagasikara" taminizany. Nisy akony teo aminny fiainam-pirenena malagasy ny fitantanany ny renivohitra. Fa niezaka nitondra fanavaozana sy fanatsarana ny tanàna izy, indrindra ny lalana. Noho ity benny tanànanAntananarivo manana fahasahiana dia nipoitra tsikelikely ny olana taminy sy ny fitondram-panjakana foibe. Rehefa ho tonga ny fotoam-pifidianana izay ho filoham-pirenena dia nirotsaka ho fidina Ravalomanana Marc. Rehefa nirotsaka izy dia lany ho Filoham-pirenena ka nitondra nandritry ny 07 taona, izany hoe ny taona 2002 ka hatraminny taona 2009.
4.11. I Madagasikara mahaleotena Ny filohanny Tetezamita Andry Rajoelina
Nanao ny fianianana amin ny maha filohanny Tetezamita azy i Andry Rajoelina tamin ny 21 Martsa 2009 na dia tsy nankatoavin ny fianakaviambe iraisam-pirenena aza izany. Araka ny hevitr ireo izay tsy momba azy dia naka ny fahefana teto Madagasikara izy taminny alàlan ny fanonganam-panjakana.
4.12. I Madagasikara mahaleotena Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina
I Hery Rajaonarimampianina dia kandidà tamin ny fifidianana ny filoham-pirenena ny taona 2013. Faharoa izy taminny valinny fihodinana voalohany, ary izy no mitarika ara-bato aminny fihodinana faharoa. Lany tamin ny salan isa 53.41 % izy tamin ny fihodinana faharoa nanoloana ny kandidà Jean Louis Robinson. Na dia nolazain ny mpanohitra azy fa nisy ny hala-bato, dia voambara ho filoha lany tamin ny fifidianana filoham-pirenena voalohan ny Repoblika fahefatra izy tamin ny 17 Janoary 2014. Nandray ny fahefana tamin ny 25 Janoary 2014 izy.
5. Jereo koa
Tolom-bahoaka taminny 1947
Wikipedia: Tantaran'i Madagasikara